တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကိုပြူးကျယ်သို့ ပေးစာ ... အပိုင်း (၁၉)
Posted by မေဓာဝီ at 10:38 AM
ကောင်းတယ်ဗျာ....။ စာဖတ်သူပရိသတ် အပေါ်မှာ ထားတဲ့ စေတနာကတော့ တကယ်ကို လေးစားစရာပဲ..။
အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ထူကြီးကို စာတိုက်ကနေပြီး လှမ်းမှာပြီး စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို အခုလို ဝေမျှတာ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင် ကြောင်းပြောကြား ခွင့်ပြုပါနော်။
အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေ၊ အစ်မတွေ ကလည်း သမီးကို အခုလို အလိုလိုက်မှန်း သိရတော့ မုဒိတာပွားမိတယ်...။
11/02/2007 4:43 PM
အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေ၊ အစ်မတွေ ကလည်း သမီးကို အခုလိုအလိုလိုက်မှန်း သိရတော့ မုဒိတာပွားမိတယ်...။
ကောင်းပါတယ် စေတနာကိုရှေ့ထားပြီး ကိုသိထားတဲ့ အရာတွေကိုရှယ်ယာလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့ မြတ်နိုးသူအပေါင်းအနေနဲ့ နှစ်ထောင်းအားရကျေနပ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်။
11/03/2007 7:56 AM
ကိုပြူးကျယ်ပေးစာကို ပြန်မရေးနိုင်တော့ဘူးတောင် ထင်နေခဲ့တာ။ စာအုပ် တကူးတက ပြန်မှာပြီး တင်ပေးတော့ ပေးစာတွေလဲ အသက်ပြန်ဝင်လာပြီပေ့ါ။ :) ရတုတွေက ဖတ်လို့ကောင်းပေမယ့် ရေးရတာ ခက်လှတယ်။ အချီပိုဒ်၊ အချပိုဒ် အပြင် အက္ခရာလုံးရေလည်း အတူတူဖြစ်ရအောင် စကားလုံးရွေးဖို့က မလွယ်လှဘူး။ ကဗျာ ဉာဏ်နည်းတဲ့ ကျနော့်အတွက်ဆို ပိုလို့တောင် ဆိုးသေးတယ်။ နမူနာ ရတုတွေထဲမှာ နတ်သျှင်နောင် ရေးတဲ့ ရတု ပါရင် ကြုံကြိုက်တဲ့ အခါ တင်ပေးပါအုံး မမေ။
11/04/2007 5:46 AM
ခုဘယ်ရောက်နေလို့ အိမ်ကပြန်မှာရတာလဲ မေဒါဝိန်ရ။
ကလူသစ်ကတော့ ၄လုံးစပ်ကဗျာတောင် နားခပ်ဝေးဝေးရယ်။ ဟဲ
i just found out that your blog is re-active now. i'm very glad that you're back!
မမေ စာပြန်ရေးနေတယ် ၀မ်းသားတယ်ဗျာ.. မကြာခင် တွေ့ကြသေးတာပေါ့
ကဗျာရဲ့အချို့စကားလုံးတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် ခက်ဆစ်လေးတွေထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဟိုတုန်းကကဗျာတွေဆိုတော့ တချို့စကားလုံးတွေက နားလည်ရခက်သလိုပဲ။
လာလာရှာတယ် ဆက်မရေးပြန်ဘူးလား မမေ
လာလည်သွားပါတယ် အမရေ။ အသစ်တွေ တင်ပြီလားလို့။ စီဗုံးလည်း မရှိတော့ ကွန်မင့်ထဲမှာပဲ ၀င်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ အမ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပြီး စာတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေနော်။
11/10/2007 4:35 AM
It isatreasure of Myanmar poems. I do really appreciate your effort and your good-will on Myanmar poems and the readers. These posts are really informative technically. I love Myanmar poems and gotalot of knowledge from these posts. And you are sincerely requested to continue these posts. I am awaiting.
I have some questions and things to discuss with you. May I know your email address? I can not type Zawgyi font. I can only read. So, only by email, I can discuss and talk to you because by doing this, I can type in Myanmar font and send you PDF file. My mail is as follows:
Waiting in anticipation your email.